Jigjiga oo lagu soo gabagabeyeey Barnaamijka Tabucaraadka Bilaha Xagaaga (Sawiro) – Radio Daljir
Jigjiga oo lagu soo gabagabeyeey Barnaamijka Tabucaraadka Bilaha Xagaaga (Sawiro)
Oktoobar 11, 2020 5:37 g 0
Xidhitaanka munaasabadan oo ka qabsoontay madasha kulamada ee Qariyaan Dhoodaan ayaa waxaa ka soo qaybgalay Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida (DDS) Mustafe Muxumed Cumar, Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Cumar Siyaad Axmed, iyo Ururada ka qaybqaata tabarucaadada.
Madaxweynaha ayaa u mahadceliyey ururada ka qaybqaatay hawlaha tabarucaada, madaxweynaha ayaa tilmaamay in la is caawiyo inay astaan u tahay inqiyamkii istaageerida Soomaalinimo uu soo laabtay.
Intii munaasabadu socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii dhalinyaradu ay sida hagar la’aanta u wadeen hawlaha tabarucaadka, waxaana ka qaybqaatay 132 kun oo dhalinyaro ah taasoo ay ku bixilahayd lacag dhan 237.6 milyan Birr.
Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar iyo Madaxa Xisbiga Barwaaqo Injineer Maxamed Shaale ayaa dhalinyaradii ururada hormuudka ka ahaa gudoonsiiyey abaalmarino kaladuwan.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dawladda Deegaanka Soomaalida Cumar Siyaad Axmed ayaa sheegayin dhalinyarada looga baahanyahay inay sii laba jibaaraan hawlaha tabarucaadka ee bulshada ufidiyaan.
Ugu dambayntii dhallinyadii lagudoonsiiyey ayaa sheegtay inay abaalmarintani dhiirigalinayso sii xoojinta hawlooda tabarucaadka.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 231 Wararka 21872